अर्थ – Page3– Esancharpati
4 months ago Monday, December 31, 2018
चितवन । जिल्लाको शक्तिखोरमा निर्माणको चरणमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी हरियाली बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय वनको जमीन भएर पनि रुख बिरुवा कम भएको उक्त ठाउँमा औँद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको हो । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकू राखिएको सो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिने छ । सो क्षेत्रमा केही साल सहित कूकाठ र झाडी रहेको छ […]
नवौं राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि एवं चौथौ अन्तर्राष्ट्रिय स्मार्ट कम्युटिङ आयोजना सुरु
4 months ago Saturday, December 29, 2018
काठमाडौं, १४ पुस । आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले शनिबार काठमाडौंमा नवौं राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि एवम् चौथौ अन्तर्राष्ट्रिय स्मार्ट कम्युटिङ सम्मेलन आयोजना भएको छ । कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजीको आयोजनामा गरिएको उक्त सम्मेलनको आज एक कार्यक्रमकाबीच नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष ई. डिल्लीरमण निरौलाले उद्धघाट्न गरेका हुन् । सम्मेलनमा चीन, भारत, थाइल्यान्ड र जापानका युवा विद्यार्थी तथा […]
काठमाडौं,४ मंसिर । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले तिव्र्र रुपमा काम अगाडि बढाएको बताएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सिईओ जोशीले सन् २०१५ मा गएको शक्तिशाली भुकम्पपछि नेपालमा पर्यटकको संख्या बढाउन ‘भिजिट […]
चितवन . पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा आज (शुक्रबार)बाट पूर्वी क्षेत्र महोत्सव सुरु भएको छ । रत्ननगर–४ शान्तिचोकको खुल्ला चौरमा सुरु भएको महोत्सव आगामी मंसिर ११ गते सम्म चल्नेछ । एन.एस.क्रियशन एण्ड इभेन्टस् प्रा.लि.र लायन्स क्लव अफ चितवन राइनो सिटीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको महोत्सवको अवसरमा चितवनको रत्ननगर बजार सिंगारिएको छ । महोत्सव सुरु हुनु पूर्व रत्ननगर […]
5 months ago Friday, November 16, 2018
काठामाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले नेपालमा करिव ९० अरव रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । लगानी नेपालको दिगो विकासका लागि खर्च गरिनेछ । निर्देशक वेन्डीले नेपालमा स्थिर सरकार निर्माण भएकाले लगानीको वातावरण बन्दै गईरहेको पनि बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्दै ढुक्क भएर लगानी […]
6 months ago Monday, November 5, 2018
‘ काठमाडौँ,१९ कात्तिक । नेपाल बोईलर कुखुरा पालक तथा उत्पादक संघले कुखुरा व्यवसायी संघले आफुखुशी जिउँदो कुखुराकोे मुल्य निर्धारण गर्दा उत्पादक किसान वर्गलाई ठूलो मर्का परेको भन्दै यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समोबार रिपोर्टस क्लब नेपालमा पीडित किसानहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघले सरकारको यस्तो ध्यानाकार्षण गराएको हो । विदेश नगई स्वदेशमै केही गरांै […]
मलेलिशयामा नेपाली कामदार पक्राउ
6 months ago Saturday, November 3, 2018
क्वाललम्पुर । मलेशिया प्रहरीले मलेशियामा नेपाली कामदारमाथि शनिबार अबेर व्यापक धरपकड गरेको छ । मलेशियाको पेनाङको बुटिक जाम्बुल भन्ने स्थानमा मलेशियान अध्यागम विभागले शनिबार छापा हानेको छ । अध्यागमन विभागले नेपाली लगायत विदेश कामदार सो स्थानमा छापा हानेर सयौंलाई गिरफ्तार समेत गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कति नेपाली छन् भन्ने विषयमा पूर्ण विवरण आएको छैन […]